Johannesburg, South Africa status on 21 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 20 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 19 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 18 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 17 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 16 Jan 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 15 Jan 2019 was .